Sodana: Fitsapan-kevibahoaka momba ny fahaleovantenan’ny Sodana Atsimo, ao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2011 7:33 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, македонски, Swahili, English
Nandeha nandatsa-bato androany (9 Janoary) ireo Sodane mpifidy mba hanapa-kevitra na hisintaka na hijanona ihany ho isan'i Sodana. Fehina tweets mikasika ny fitsapan-kevibahoaka ity. Azonareo atao ny manaraka mivantana ireo Tweets amin'ny fampiasàna ny tenifototra #SudanRef.
Alun McDonald manamarika fa novàna ny fifampiarahabàna Sodane fanao hatrizay:
Sahala amin'ny novàna androany ny fomba fifampiarahabàna nentin-drazana Sodane ka lasa “Akory, efa nifidy ve ianao?” #SudanRef
“Mizotra tsara ny fifidianana hatreto,” hoy i Wandering Tracy mandefa tweets :
Mizotra tsara ny fifidianana hatreto. Irariantsika mba ho fotoana fitoniana ihany koa ireo androm-pifidianana sisa sy ny vokatra ho avy. #Sudanref #sudan
Zendana i Ben amin'ny fahamatoran'ireo mpifidy:
Zendana aho amin'ny fahamatoran'ireo mpifidy ao #Sudanref ivelan'i Khartoum. #Sudan
Milahatra mandritry ny 6 ora ireo mpifidy fa tsy mitaraina, hoy Lindy Janssen manamarika :
Ny fomba milamina nentina nanatanterahana ny #sudanref dia tena miavaka. Milahatra mandritry ny 6 ora anaty hafanana nefa zara raha mitaraina. #respect
Misy atmosfera lehibe any amin'ireo birao fandatsaha-bato:
Laharana lavabe any amin'ireo birao fandatsaham-bato, mitarazoka & mafana, saingy toa tsy eritreretin'ny olona izany. Atmosfera lehibe. Nifidy ny hisintaka ny rehetra, “mazava loatra” #SudanRef
Manontany tena i Degner ny amin'izay mety ho anarana vaovao entin'i Atsimon'i Sodana:
Efa mba misy mahafantatra ny anarana hiantsoana ilay firenena Sodane vaovao ve ? Sodàna vaovao, Sodàna Atsimo, Repoblika Afovoany Andrefan'i Afrika? #SudanRef
Voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana hanoherana ny fitsapan-kevibahoaka Sodane ny zafikelin'ny Praiminisitra teo aloha:
Abeer Osman zafikelin'ny Praiminisitra teo aloha nentina any amin'ny paositry ny polisy nandritra ny hetsika fanoherana ny #Sudanref.
Vaviantitra iray no mihira hoe, “Veloma ry Arabo”:
Vaviantitra iray mandihy eo ivelan'ny paositry ny polisy ao Garang sady mihira ny hoe ‘Veloma ry Arabo’ #SudanRef
Lehilahy iray no nihiakan- karavoana tao amin'ny birao fandatsaham-bato:
Lehilahy iray tao amin'ny birao fandatsaham-bato no nihiaka hafaliana satria nifidy izy. Anjatony ireo nitehaka azy & nanome rariny azy. #SudanRef
Nanomboka niaraka tamin'ny hira sy vavaka ny latsabato tany Etazonia (Nandray anjara tamin'ny fitsapan-kevibahoaka ireo Sodane tatsimo tany amina firenena 8 hafa manerana izao tontolo izao):
Manomboka miaraka amina hira sy vavaka amin'ny teny Arabo ny fifidianana araka ny fangatahan'ireo mpifidy tao Dallas. #SudanRef
Vijay manontany tena hoe fomba ahoana no hahafahana mampitàha ny fitsapan-kevibahoaka Sodane amin'ny tany Timor Atsinanana:
Manontany tena hoe ahoana no hampitahàna ny #SudanRef amin'ny tany Timor Atsinanana. Ny fanontaniana goavana: Hahasarika ireo orinasa Amerikana/Anglisy ve ny solika ao SS (Sodana Atsimo) ka hanosika ny Sinoa hiala? Ho tonga ve ny fandriampahalemana?
Ny mpifidy voalohany tao Dallas, Texas;
Zokiolona tamina biraom-pandatsahambato no mpifidy voalohany indrindra tao Dallas, izay taorian'ny nampidinany ny vatony tao anaty vata, dia nampiakatra ny tànany sady nanao ny mariky ny fanaovam-beloma #SudanRef #Sudan.
Mavesa-danja kokoa ve ny Shari'a noho ny firaisam-pirenena?:
Sora-baventy ao Khartoum: “Tsy misy Firaisam-pirenena ivelan'ny Shari'a,” mba hilazàna hoe mavesa-danja noho izay Sodana tokana ny Shari'a. Tena mampanahy ny toy izany eto. #sudanref
Farany, ny zanaka vavin'ilay praiminisitra voalohany indrindra teto Sodàna dia nanao hetsika hanoherana ny fitsapan-kevibahoaka:
Zanaka vavin'ilay Praiminisitra tsy miankina voalohany indrindra teto #Sudan no nampisaona ny sainam-pirenena, nametraka fehy mainty tamin'ny rindrina mba ho fanoherana #Sudanref